Home » Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa » Fizahan-tany sy COVID any Nizeria: HE Alhaji Lai Mohammed niresaka tamin'ny minisitry ny fizahantany afrikanina
Fizahan-tany sy COVID any Nizeria: HE Alhaji Lai Mohammed niresaka tamin'ny minisitry ny fizahantany afrikanina
Nizeria no toby herinaratra ara-toekarena any Afrika ary iray amin'ireo firenena lehibe indrindra amin'io kontinanta io. Ampahany kely amin'ny toekarena ankapobeny ihany ny fizahantany, fa ny mozika sy ny lamaody dia misy ifandraisany amin'ny fizahan-tany ary izy rehetra dia mitana andraikitra lehibe ao Nizeria.
Ny minisitra HE Alhaj Lai Mohammed no mitarika ny portfolio ny Fampahalalana sy ny Kolontsaina any Nizeria. Omaly dia nanatrika ny latabatra boriborintany minisitra faharoa nokarakarain'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany (ATB) izy ho an'ny Project Hope ary tarihin'i Dr. Taleb Rifai. Dr. Rifai no filohan'ny Project Hope ho an'ny ATB ary ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha.
Inona no ataon'i Nizeria hiadiana amin'ny COVID-19? Ahoana ny fikarakaran'i Nizeria ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany? Namaly ireo fanontaniana ireo Andriamatoa Mohammed.
HE Alhaj Lai Mohammed dia teraka tao amin'ny fianakavian'i Alhaji Mohammed Adekeye tamin'ny 1952. Teratany Oro izy ao amin'ny fanjakan'ny Kwara. Nahazo mari-pahaizana licence amin'ny teny frantsay avy tao amin'ny Oniversiten'i Obafemi Awolowo tamin'ny taona 1975. Nanomboka nahazo mari-pahaizana momba ny lalàna tao amin'ny University of Lagos izy, ary avy eo ny School Law Nizeriana tamin'ny taona 1986.
Henoy ny valinteniny sy ny adiresiny: